March 8, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 8th, 2017'
Ra’iisal Wasaare Khayre oo Maanta ka Qayb Galay Xafladda Maalinta Haweenka Aduunka (SAWIRRO)
March 08, 2017 – Ra’iisal Wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane, Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ka qaybgalay xaflada hambalyana u diray haweenka Soomaalyeed, isaga oo ugu hambalyeeyey munaasabadda maalinta 8-da Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka. Ra’iisul wasaaraha oo qudbad kooban ka jeediyay goobtii xafladda lagu qabtay ayaa yiri: “Inkastoo aaney aheyn maalin la …
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo Maalmaha soo Socda ku Dhawaaqi Doono Golihiisa Wasiirada
March 08, 2017 – Ra’isul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa wali ku hawlan wadatashiyada ku aadan dhismaha Golahiisa Wasiirada, waxana xulashada ay iminka maraysaa meel gabo-gabo ah. Inta badan Wasiirada kamidka noqonaya Xukuumada cusub ayaa la sheegay inay diyaarsan yihiin, waxaana wali harsan wasiiro yar oo wali wadatashiyo laga leeyahay cida ku haboon ee loo …
Xijaabkii Shirkadda NIKE (VIDEO)
Xijaabkan cusub oo ah nooc xirashadiisu fududahay ayaa waxaa laga sameeyay maro qafiif ah oo sidii laastiigga u kala baxaysa lehna dulduleello yaryar oo hawo kasoo gali karto, wuxuuna soo shabahaa marada qammaark Sanadkii tagay bishii October ciyaaraha dumarka adduunka FIFA oo da’doodu ka yartahay 17-sano ee kana dhacay dalka Jordan ayaa soo jiitay indhaha …
Wikileaks oo Shaacisay in Sirdoonka Maraykanka ay Dhagaystaan Taleefanada, Computereda iyo TV-yada Shacabka (VIDEO)
March 08, 2017 – Website-ka Wikileaks ayaa baahiyay macluumaad ku saabsan waxa ay ku sheegtay farsamooyin badan oo hay’adda sirdoonka Maraykanka ee CIA-du u adeegsato inay basaasto xogtana kagala baxdo kombuyuutarrada iyo taleefanada shacabku ay adeegsadaan. Farsamooyinkan la sheegay in ay CIA-du adeegsato ayaa lagu sheegay in ay ka mid yihiin barnaamijo si fudud sirta …
Sir Laga Faafiyay Ha’adaha Sirdoonka (VIDEO)
Farsamooyinkan la sheegay in ay CIA-du adeegsato ayaa lagu sheegay in ay ka mid yihiin barnaamijo si fudud sirta ugala bixi kara Softwara-da Windows, Android, iOS, OSX iyo Linux oo dhamaantood ah habab ay kombuyuutaradda iyo telefoonnada Smartphone-ka ay ku shaqeeyaan. Wikileaks ayaa waxa ay sheegtay inay xogtani ka heshay cid ay ku kalsoontahay, ujeedada …
Wasiirka Gaashaandhigga oo Maanta Kormeer ku Tegay Xereda Ciidamada XD ee Damaanyo (SAWIRRO)
March 08, 2017 – Wasiirka Gaashaandhigga ee dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kormeeray xerada Ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya ee Damaanyo, taas oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Xerada Damaanyo ayaa waxaa ka socda dhisme xoogan oo dib loogu howlgalinayo 26 sano ka dib, kaasoo ay wado shirkad ay maalgelisay Dawladda Isutagga …